Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd yasungulwa ngo 2009 futhi imboni yayo kuyinto e Shenzhen. With10 kweminyaka yentuthuko, kusukela OEM ODM, sinake bayanda ukuthuthukiswa imikhiqizo emisha, yakhelwe onobuhle ahlukahlukene lidumile izici Ariza futhi ungumnikazi patent, zonke lezi amamodeli kakhulu evunywe amaklayenti ethu kuwo wonke amazwe.
O ur elizimisele ukusiza wonke umuntu aphile ukuphila okuqondile ephephile. Sinikeza best-in-class ukuphepha siqu, ekhaya security, kanye nemikhiqizo komthetho ukukhulisa ukuphepha kwakho. Silwela afundise futhi athuthukise amakhasimende ethu - ukuze, lapho sibhekene nengozi, wena nabathandekayo bakho anemisila imikhiqizo enamandla hhayi kuphela, kodwa ulwazi kanye. Sikholwa ngukuthi wonke umuntu kufanele ivikeleke ukuze bakwazi ukuphila ephephile, ukuphila okunempilo kanye nokuthula kwengqondo.
A riza izimisele ukugcina izinga okusezingeni eliphezulu imikhiqizo kanye nokuhanjiswa kwezidingo ephelele futhi isixazululo, ukuba ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuhlangabezana nezidingo ikhasimende. Ukuze kokunikeza service esikahle more, Ariza usanda kwethula lento ezihlukahlukene entsha B2B kanye B2C yokuthengisa indlela. Nge emisha okuqhubekayo nokuphishekela ukuphelela, Ariza uye ngumnikazi Quality professional nohlelo lokuphatha kusukela aqine. Siye got ngempumelelo izitifiketi ISO9001 CE RoHS FCC SGS.